NAXDIN: Xasan Cabdi Oo Islii Ay Ku Dileen Burcad Ay Xaaskiisa Usoo Adeegsatay (Sawirro) - Aayaha
Aayaha editorMay 10, 2020
Xasan Cabdi Maxamed, oo ahaa Taksiile Soomaali Kenyaan ah, ayaa waxaa dilay koox Buracd ah oo ay usoo adeegsatay xaas ay kala tageen, kuwaasoo dilkiisa u adeegsaday tooreey.
Dhacdadaan oo ahyd mid fool xun isla markaana si aad ah looga naxay ayaa waxay ka dhacday xaafadda Soomaalida u badantahay ee Islii magaalada Nairobi.
Dilka marxuumka oo ahaa 33 sano jir ayaa waxay boolisku usoo qabteen 5 eedeysane kuwaas oo iminka xiran.
Booliiska ayaa helay muuqaal eedeysaneyeesha ay ku sheegayaan inay iyaga dileen Xasan Cabdi Maxamed oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ku shaqeysan jiray Taksi.
Waxay sidoo kale sheegeen inay soo adeegsatay xaaska marxuumka si ay ugu hanjabaan ugana cabsi geliyaan arrimaha kiiska furriinka ee socda.
Eedeysaneyaasha ayaa waxay kala yihiin, Ahmed Hussein, Ikaran Mohamed Ahmed, Mohamed Abdi, Ahmed Hussein iyo Mara Bisar.
“ 6 ruux ayaanu ahayn. Waxaan rabay inaan cabsi geliyo laakiin tooreeyda ayaan ka geliyay dhabarka waana cararay,” ayuu yiri Axmed Xuseen oo iminka xiran, sida muuqaalka ka muuqata.
“Kabelo ayaan iska raacnay 9th street waxana aadnay Jam Street. Kabelo tooreey ayuu watay…wuxuu na weydiistay inaan la dagaalno Seedigiis…ninka walaashiis qabo. Waxaa jiray isku dhac dhex maray marxuumka dhintay iyo Kabelo.
Marxmuuka la dilay isagana tooreey ayuu watay, wuxuuna bilaabay inuu eryado Kabelo balse Kabelo ayaa dagaal uga yimid marxuumka tooreeyna ku dhuftay. Waxaanu ahayn 6 ruux” sidaas waxaa boliiska u sheegay Cabdullahi oo la qabtay.
Xasan Cabdi Maxamed oo loo yaqaanay “Wabera” ayaa galabtii Sabtida lagu dilay meel u dhow Masaajidka Al-Hidaya isagoo Sooman, waxana marxuumka uu ahaa nin ay si weyn looga yaqaanay Jam Street.
Eedeysanayaasha ayaa la ogaaday inay qaraabo la yihiin xaaska marxuumka oo lagu magacaabo Muna.
Waxaa la qabtay Axaddii.
Shabakadda Aayaha, ayaa ogaatay in marxuumka iyo Xaaskiisa Muna Aadan Yuusuf, uu qorshaha furiinkooda ka socday maxkamadda Nairobi.
Lamaanaha ayaa waxay isu dhaleen laba caruur ah iyadoo warqadaha dalabka furiinka oo ay heshay Aayaha, ay Muna tilmaamtay inay la kulantay jirdil, xadgudubyo iyo inaysan helin taageero, jacayl iyo ilaalinta ay leedahay xaaska.
22 January 2020, Xasan ayaa isna dhankiisa maxkamadda u gudbiyay jawaabtiisa, isagoona sheegay inuu taageero isla markaana bixiyo waxyaabaha uu qoyskiisa iyadoo ay jirto inuu lacago yar ka helo Taksiga.
Xasan waxa uu xaaskiisa ku tilmaamay mid aanan masuuliyad qaadin iyo inaysan ku guul dareysatay daryeelka caruurta.
Ilo ka tirsan boliiska baaraya kiiska ayaa u sheegay Aayaha in 5 ruux ee la xiray ay ka tirsanyihiin Buracadda loo yaqaan SuperPower, oo ah koox burcad ah oo ay u badanyihiin dhallinyaro Soomaali ah kana howlgasha xaafadda Islii iyo meelaha kale ee u dhow.
Buracadda ayaa iminka ku jiraan xabsi waxana lagu wadaa in maxkamad lasoo taago.